Abwaan Nidaamiye Oo Ku Geeriyoday Muqdisho. – SBC
Abwaan Nidaamiye Oo Ku Geeriyoday Muqdisho.
Eebe ha u naxariistee Abwaan Maxamed Cumar Nuur Nidaamiye oo ka mid ahaa bahda fanka Soomaaliyeed mudo dheerna ku jiray howlaha fanka ayaa maanta ku geeriyooday isbitaalka Aadan Cadde Oo ku yaala caasimada Somalia ee Muqdisho halkaa oo todobaadyadii ugu dambeeyay ku xanuunsanayay .
Sida Uu Warbaahinta Dowladda U Sheegay Abwaan Cabdi Dhuux Yuusuf Oo Ah maareeyaha golaha murtida iyo madadaalada Ee Tiyaararka Muqdisho Waxaa Uu Marxuumku Ugeeriyooday Xanuun Mudooyinkii Udanbeeyay Hayay,
Abwaanka ayaa waxaa si weyn loogu xasuustaa heeesaha kala duwan ee uu qaaday sida kuwa wadaniga ,jaceelka ,waxaa sidoo kale uu laxamey jiray heesaha ala ha u naxariistee waxaa uu sidoo kale ka tirsanaa bahda warbaahinta qaranka Soomaaliyeed.
Mar Uu Ka Hadlayay Taarikh Marxuumka Ayuu Yiri “abwaan Nidaamiye alla ha u naxariisto waxaa uu ahaa ciidan markiisii hore waliba ciidamadii ugu horeeyay ee Somalia yeelato ee Cali boodaaye ayuu ka mid ahaa waxaa uu sameeeyay heeso badan dhankaa iyo gobolka baay ayuu u badnaa heesaha uu sameeeyay waxaa ka mid ahaa heesta Baydhabo iyo heeso kale”ayuu yiri abwan Cabdi Dhuux.
Waxaa La Filaya in Marxuumka Aas Qaran Loogu Sameeyo Magaaladda Muqdisho Ee Caasimadda Somaliya.